Mogadishu Journal » AMISOM” Talaabo ayaan ka qaadeynaa Al-shabaab
Mjournal :-AMISOM ayaa sheegtay in ururka Al-shabaab ay kordhiyeen Argagixinta shacabka Soomaaliyeed, balse waxay tilmaamtay in shacabka aysan marnaba ku niyad jabi doonin dhacdooyinka kala duwan.
AMISOM ayaa hadalkan la xiriirisay weerarkii qaraxa ku bilowday oo Shabaab ay ku qaadeen Sabtidii ina dhaaftay xarunta Otto Otto oo ay degan yihiin Wasaaradaha arrimaha gudaha iyo amniga Soomaaliya, halkaasi oo ay ku naf waayeen dad ku dhaw 15 qof.
Hawlgalka AMISOM ayaa sheegay weerarkii Shabaab ay ku qaadeen xarunta Otto Otto inuu muujinayo in Shabaab aysan wax dan ah ka lahayn xasiloonida Soomaaliya iyo horumarka dalalka Geeska Afrika.
Taliska hawlgalka AMISOM ayaa ugu dambeyn shacabka Soomaaliyeed ka dalbaday in ay la shaqeeyaan qeybaha kala duwan ee Ciidamada, si loo helo dal nabad ah.
Afhayeenka Wasaaradda amniga oo xilka laga qaaday